तल झर्ने सिढीहरू 🥇 क्रिएटिव स्टप 🥇 🥇
तल झर्ने सिढीहरू
अघिल्लो खेल: Tappy Flappy ..
Tappy Flappy ट्रम्प टेपी Flappy ट्रम्प सबै उमेरका लागि उपयुक्त एक रमाइलो उडान खेल हो। यसको टी [...]
अर्को खेल: क्रिसमस ..
क्रिसमस बलून फोरेस्ट क्रिसमस बलून बर्स्टिंग एकदमै नयाँ आर्केड खेल हो। यदि तपाईंसँग धेरै छ भने [...]
तपाईंले भ the्या? हलको बारेमा सुन्नुभयो? यो दरबार असंख्य सिढिहरू मिलेर बनेको छ, जहाँ स्टिकम्यानले स्लाइड गर्न र गति दिन सक्दछ। तल झर्ने सिढीहरू उच्च स्कोर आर्केड खेल हो। हामी सँधै सीढीबाट तल खस्दा के हुन्छ भनेर हामी सँधै सोच्दछौं। अब तपाईले उत्तर पाउनुहुनेछ। स्पाइकहरू वेवास्ता गर्नुहोस्, अन्यसँग घुमाउनुहोस्। यो ध्यान दिन लायक छ कि सीढिहरु अनन्त छन्, जबकि भर्याairsहरु को दुबै को हावा पर्खाल छैन। यदि तपाईं सिढीको दुबै पक्षबाट खस्नुहुन्छ भने तपाईंले खेल पुन: सुरु गर्नुपर्दछ। के तपाई तयार हुनुहुन्छ?